दैनिक राशिफल ; पौष १३ - Likhu Online
१३ पुष २०७७, सोमबार ०५:१२ प्रकाशित
दैनिक राशिफल : वि. संं. २०७७ पौष १३ गते सोमबार, सन २०२० डिसेम्बर २८ मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ। वित्तीय मामिलामा भविष्यको लागि राम्रो योजना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आयमा वृद्धि हुनेछ। मनमा नकारात्मक भावना उत्पन्न हुनसक्छ।
स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। तपाईंले आफन्त वा साथीहरूबाट उपहार पाउनुहुनेछ। रमणीय यात्रा र उत्तम भोजनले तपाईंको दिन आनन्दमय बनाउनेछ। आर्थिक लाभको सम्भावना छ। वैवाहिक जीवनको उत्तम सुख प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ।
वाणीमा संयम राख्नुहोला, अन्यथा कसैसँग मनमुटावको स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थता रहन सक्छ। परिवारमा नकारात्मक वातावरण रहनेछ। आँखा सम्बन्धि समस्या आउनसक्छ। अधिक खर्च हुनाले आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ।
आकस्मिक धन लाभ मिल्ने सम्भावना छ। आय बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना उच्च छ। छोरा र पत्नीबाट पनि लाभ प्राप्त हुनेछ। उत्तम भोजनका साथै स्त्री सुख पनि मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछन्।
कार्य सफलता मिल्न ढिलाई हुनसक्छ। कार्यालय वा घरमा जिम्मेवारीहरूको बोझ बढ्नेछ। तपाईले जीवनमा अधिक गम्भीरता अनुभव गर्नु हुनेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ छैन। यस दिन कसैसँग नयाँ सम्बन्ध पनि स्थापना नगर्नुहोस्। बुबासँग मतभेद हुनसक्छ।
शारीरिक थकान, आलस्य र चिन्ताको अनुभव हुनेछ। सन्तानसँग मनमुटाव वा मदभेद हुनसक्छ। सन्तानको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला। कार्यक्षेत्रमा उच्च अधिकारीसँग बहस हुनसक्छ। राजनीतिक कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। धार्मिक कार्य वा धार्मिक यात्राको लागि खर्च हुनेछ।
आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहोस्। वाणी तथा खराब व्यवहारको कारण वाद-विवादमा पर्न सकिन्छ। आकस्मिक धन लाभ मिल्ने सम्भावना छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। अधिक खर्च हुनेछ। यस दिन स्त्री तथा पानीबाट टाढा रहनु नै राम्रो हुनेछ।
रोजगार-व्यवसाय क्षेत्रमा विशेष लाबह मिल्नेछ। साथै, साथी-भाई, आफन्त तथा अग्रजबाट पनि लाभ मिल्नसक्छ। सामाजिक समारोहमा संलग्न हुने मौका मिल्नेछ। तपाईं दिनभर प्रफुल्लित रहनु हुनेछ। आयका स्रोत बढ्नेछ। सांसारिक जीवनमा तपाईले आनन्दको अनुभव गर्नु हुनेछ।
आर्थिक तथा व्यापारिक आयोजना गर्नको लागि दिन अत्यन्त शुभ रहनेछ। हेरक कार्य सरलताका साथ सम्पन्न हुनेछन्। तपाईंमा यस दिन परोपकारी भावना रहनेछ। रोजगार व्यवसायमा उन्नति तथा मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक जीवन आनन्दमय रहनेछ।
लेखन तथा साहित्य क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। मानसिक तनाब बढ्नेछ। शारीरिक थकान रहनेछ। सन्तान सम्बन्धि विषयले मन चिन्तित रहनेछ। उच्च अधिकारीहरू वा प्रतिस्पर्धीहरूसँग अनावश्यक बहसमा प्रवेश गर्नु फाइदाजनक हुँदैन। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ।
नकारात्मक सोचको कारण मनमा निराशा उत्पन्न हुनसक्छ। यस समयमा, तपाईंले मानसिक उत्तेजना र क्रोधको भावना अनुभव गर्नु हुनेछ। खर्च बढ्नेछ। परिवारमा वाद-विवाद हुनसक्छ। वाणीमा संयम राख्नुहोस्। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। दुर्घटनाबाट बच्नुहोस्।
दाम्पत्य जीवनमा जीवनसाथीसँग निकटताको अभाव हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना उच्च छ। मित्र तथा आफन्तसँग रमणीय भेटघाट हुनेछ। प्रियजनहरूको रोमान्स प्रगाढ हुनेछ। सार्वजनिक जीवनमा प्रगति हुनेछ। उत्तम वैवाहिक आनन्द प्राप्त हुनेछ। rashifalonline